တစ်ဦးက pinched sciatic အာရုံကြော - ကုသမှု
အဆိုပါ sciatic အာရုံကြောခန္ဓာကိုယ်အပေါငျးတို့သအာရုံကြောနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကြီးဆုံးစဉ်းစားသည်။ ၎င်း၏အစအဦးပု lumbosacral plexus ထံမှလာ, နှင့်အမျှင်အပေါငျးတို့သကိုယ်လက်အင်္ဂါမှ innervation ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအောက်ပိုင်းခြေလက်ဖြတ်သန်း။ တစ်ဦးက pinched sciatic အာရုံကြောနာကျင်မှုကို, ဒါပေမယ့်လည်းအီကိုသာသွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း၏ယာယီအရှုံးလည်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက pinched sciatic အာရုံကြော - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
ပထမဦးဆုံးနှင့် pinch sciatic အာရုံကြော၏အဓိကလက္ခဏာသက်သေနာကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ဒါဟာလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်အခြားခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေစဉ် amplified, ဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလာသောအခါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမီးလောင်သောချွန်ထက်နှင့်အောက်ပြန်, တင်ပါးနှင့်တင်ပါးထဲမှာနာကျင်မှု stabbing နိုင်ပါသည်။
လူနာလမ်းလျှောက်နေစဉ်အခြားလမ်းအမှီဖို့ကြိုးစားထားတဲ့အတွက်တိကျတဲ့သွား။ ဤသည်နာကျင်မှုလျှော့ချဖို့ကအနည်းဆုံးတစ်နည်းနည်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆရာဝန်များသည်သူ၏ကောင်းသောခြေထောက်ပေါ်မှာဤအဆောက်အဦကိုခေါ်ပါ။
pinching ၏အချက်မှာဝိသေသချိုးဖောက်မှုခြုံငုံ sensitivity ကို။ ဒါဟာအစကျမှုကိုထငျရှားအရေပြားထုံသို့မဟုတ်စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းအဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ sciatic အာရုံကြော pinching ကုသတစ်ဦးချင်းတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ အများအားဖြင့်, ဆရာဝန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနှင့်ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းအပေါ်အခြေခံပြီး, ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့။ Pinching ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်
ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာ disc ကိုရောဂါ ;
herniated disc ကို ;
pinched အာရုံကြော piriformis ။
တစ်ဦးက pinched sciatic အာရုံကြော - ကုသမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဆရာဝန်ပွုနိုငျသနညျး အချို့သောဆေးဝါးများယူပြီး assign ဒါမှမဟုတ်လိမ်းကုသမှုကိုအသုံးပြုပါ။ ဤပြဿနာတွင်, သင်တစ်ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲပြီးနောက်, သငျသညျအကြံပြုစေခြင်းငှါ:
တက်ဘလက်နဲ့ထိုးလက်ခံရရှိအဖြစ်အထူးသင်တန်း antiinflammatory ကုထုံး။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး: electrophoresis, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF, ဆေးဖက်ဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် paraffin ကိစ္စ္စနှင့်အတူ phonophoresis ။
ဆရာဝန်တစ်ဦး, တစ်ဦးလုံလုံလောက်လောက်ထိရောက်သောနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်ကုသမှု၏ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများ။ သူတို့ကနာကျင်မှု, ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချကိုကူညီပေးပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးကုသမှု sciatic အာရုံကြော entrapment တစ်ဦးတည်းသောနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး pinch အာရုံကြောများ၏အခြေခံအကြောင်းတရားများ၏ကုသမှုတွေအကြောင်းမေ့လျော့မနေပါနဲ့။ ကုထုံး၏ဤအပြည့်အဝအကွာအဝေးအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကာလ၌အများဆုံးအပြုသဘောရလာဒ်များကိုငါပေးမည်။
pinch sciatic အာရုံကြောအိမ်မှာကုသမှုအတွက်နည်းလမ်းများ
ဒါဟာထင်းရှူးသို့မဟုတ် liqueurs ခရစ္စမတ်ကျောက်ကပ်ကနေဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ပွတ်သပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီပြုတ်ရည်ဂလားပင်လယ်အော်တစ်ဝက်တစ်နှစ်ခွဲလီတာဗူး dandelions အရက်, dandelion ၏ပန်းပွင့်ကနေဖန်ဆင်းတော်နိုင်ပါသည်။ တစ်ပတ်အကြာတွင်ပြုတ်ရည်အသုံးပြုမှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းပြီအထူးနံ့သာဆီပူနွေးလာမှုနှင့်အတူ cupping ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ထက်ဒေသခံနှိပ်နယ်ရန်။
brush အကြောင်းမရှိသွင်းကုန် preheated ။
ဖယောင်းအစစ်ခံအာကာသတွင်ပလတ်စတစ်အိတ် ထား. , တက်လှိမ့်ဖို့။
ဖယောင်းအေး၏အချိန်မှာရောင်ရာအရပျ၏ပြီးပြည့်စုံသောအပူအဘို့အခွင့် Compress ။
ပုံမှန်ကျွမ်းဘားဆောင်ရွက်ခြင်းအထိရောက်ဆုံးနဲ့ရိုးရိုးကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကတင်ပါး၏အလှည့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နဲ့ရိုးရိုးဆန့်စေနိုင်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းရုတ်တရက်လူရှုပ်ခြင်းမရှိဘဲ, ညင်ညင်သာသာပြုသင့်ပါတယ်။ အများအပြားကြိုဆိုဧည့်အီသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်နာကျင်မှုပြီးနောက်လျှင်, သင်ချက်ချင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ဒီကုထုံးကိုသင်ကိုက်ညီမထားဘူး။
Sinusitis - ပဋိဇီဝဆေးများနှင့်အတူကုသမှု
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ osteochondrosis နှင့်အတူ Vertigo
စားပြီးနောက်ဝမ်းလျှော - အကြောင်းရင်းများ
Atrial fibrillation - လက္ခဏာများ
Revalgin - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
2nd မျိုးဆက် cephalosporins
ကင်ဆာပညာရပ်အတွက် Irradiation - အကျိုးဆက်များ
Ursofalk သို့မဟုတ် Ursosan - သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့?
လွနားကို - ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လို?
မိတ်ကပ်မပါဘဲ Lana Del Rey
တမိသားစုလုံးအတွက်အိမ်လုပ်သောက်ဘို့အရသာရှိတဲ့ကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများ - သွေ့ခြောက် apricots ၏ Compote
လျှပ်စစ်ကော်ဖီ grinders - သွန်းလောင်း၏စစ်မှန်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ရွေးချယ်ဖို့ရာမော်ဒယ်?
ပင်လယ် buckthorn ရေနံလောင်ကျွမ်း
Taco - ကြော်